Momba anay - Guangzhou Beyond Lighting Co., voafetra
Izahay dia iray amin'ireo orinasan-tsofina fihainoana sofina any Shina izay manomboka mamolavola sy mamokatra ny jiro fanamafisam-pahefana mahery vaika 40W sy 60W.
Ny vokatra rehetra dia nandalo ny fenitra CE, EMC, LVD, RoHS.
1.Mihoatra ny 10 taona niainana R&D tsy miankina. 2. Manana ny vokatra fanasan-damba feno indrindra eo amin'ireo ozinina sinoa. 3. Ny teknolojia vokatra dia eo ambanin'ny fenitry ny tsena any Eropa.
4. Mangina henjana dingana QC izay mandrakotra ny 100% ICQ, 100% vita ny vokatra mandinika (farafaharatsiny 48 ora), fitsapana tsy tantera-drano, fitsapana hafanana avo, fanahafana ny fitsapana hovitrovitra fitaterana..tc.
5.Rich Famous Brands traikefa fiaraha-miasa izay afaka manao valiny haingana amin'ny fitakian'ny mpanjifa. 6. Manankarena OEM, fanohanan'ny ODM & traikefa amin'ny serivisy. 7.Ny vokatra dia voamarina tamin'ny fampisehoana marobe
Isan-taona dia hampivelatra jiro mahery 10 mahery izahay, ny jirontsika dia napetraka amin'ny sehatra anatiny sy iraisam-pirenena isan-karazany, ampiasaina ao amin'ny Guesthouse, Hotels ary toerana hafa sy tsy miankina sns, ary aondrana any Eropa sy Amerika mihoatra ny firenena 80 ary faritra.
Isan-taona dia hanatevin-daharana ny fampirantiana izahay: Prolight + feo Guangzhou; Shanghai Prolight + Sound Fair; Fampiratiana palma any Beijing; Musikmesse & Prolight + Sound Frankfurt; mpampiantrano fampisehoana LDI any Las Vegas; NAMM RUSSIA + mozika mozika
Beyond no marika anay, satria ny sary famantarana dia miatrika ny tsena iraisam-pirenena ny orinasanay, manandrana ny tsara indrindra mba hanomezana fahafaham-po ny zavatra takian'ny mpanjifa iraisam-pirenena rehetra, mba ho tonga mpitari-dalana lehibe eo amin'ny sehatry ny jiro sehatra fitsitsiana angovo, maro loko ary manan-tsaina.
Asa fitoriana ny kolontsaina sy ny orinasa:
1> Mamorona lanja ho an'ny mpanjifa, mamorona tombony ho an'ny mpiasa, mamorona tombony ho an'ny orinasa, mamorona harena ho an'ny fiarahamonina.
2> Fahombiazan'ny mpanjifa, miompana amin'ny olona, ​​fikatsahana ny hatsarana, ny fahamboniana ankapobeny
3> Manaraka ny varotra, ny kalitao ary ny fampandrosoana, ny serivisy sy ny filaminana, ny haitao ary ny fanavaozana izahay hamaly ny fangatahan'ny mpanjifa ho tanjona.
4> Beyond dia manome hatrany ny vokatra tsara indrindra ho an'ny mpanjifa amin'ny vidiny mirary.